Dhig Own Video DVD la diiwaangeliyey Videos for Christmas
> Resource > DVD > Sida loo sameeyo Own Video DVD
Ma aha in aad tahay inaad ku bilowdo ka xoq kor u taagaysa camera ama fiidiyo si aad u awoodo inaad adiga kuu gaar ah DVD video. Ma ku fikirtay clips video diiwaan on your casriga ah? Si fudud ayaad u adeegsan kartaa iyaga ka mid ah, xaalkaa, dhejiya ama iyaga ku milmaan wadajir si ay u abuuraan isku waslad cajiib ah oo kuu gaar ah DVD video for Christmas soo socda! Waa kuma sidii ay adag tahay sidaad u malayseen iyo waa fiican ee la wadaago oo la qoyskaaga iyo saaxiibadaa on sida marmarsiinyo. Dhab ahaantii waxba ka, ka fiican tahay in aad DVD samaynaysaa video sida ay tahay shakhsi iyo maskax leh oo ay u badan tahay arki doonto sida aad haysataan ugu breathtaking Christmas.
Ha welwelin xataa haddii aad ka hor inta aanay marnaba samayn, waxaad u baahan tahay oo dhan waa Wondershare Video Converter Ultimate iyo interface user-friendly ma uu taag darnaan doontaa filayo. Waxaad ku soo bixi karaan midkood ama Windows Mac PC in lagu bilaabo.
Talaabada 1: geliyaan videos aad duubay
Talaabada 2: Beddelaan qaabab file leheyn
Talaabada 3: shakhsiyeeyo videos aad duubay
Talaabada 4: Samee adiga kuu gaar ah DVD video
Haddii aad abuuray toobiye ku saabsan desktop, si fudud double-guji Converter video ah ay u bilowdo barnaamijka. Ka dib markii in aad si fudud u gali kartaa videos aad diiwaan interface by muujinta deg deg ah jiitaa-iyo-hoos u dhac ama dhirtuba ku dhex fayl deegaanka adigoo gujinaya Add Files .
Haddii aad u baahan tahay in la beddelo saldhig oo aad video files, waxa aad heli kartaa Settings sida iftiimiyay in shaashada ah. Waxaa jira faahfaahin dheeraad ah si ay u garaaca jir iyo heerka xoogaa ku dheehan qabsiga buugga la aqoon saday karaan in. Waxaa jira icon Edit laga heli karaa mid kasta oo ka mid ah videos uploaded sidoo for tafatirka kasta oo aad rabtid laga yaabaa in ay sameeyaan.
Ha welwelin ku saabsan qaabab file leheyn ee videos aad diiwaan maadaama ay tani kama dambaysta video Converter wacdaraha taageeraa in ka badan 150 qaabab file kala duwan. Read dhex Tallaabada 2 haddii ay diinta ka ah lagama maarmaan ama gudub Tallaabada 3.
Waafaqid ee qaabab file ku xiran tahay sida iyo meesha aad jeceshahay doonaa in Radidiyaha videos ku saabsan. Taasi waa tusaale ahaan; on your TV, qalabka la qaadi karo ama iwm ugu fiican video goobaha ama qaab file talinayaa sida kala duwan yihiin, laakiin waxaa jira presets dhisay-in si Converter video aad nolasha. Si fudud u eega doorashadooda dheeraad ah oo ka soo Qaabka Output hoos-hoos menu 's.
Marka aad go'aansaday, guji loogu badalo in ay rukun-xaq u hooseysa interface ka iyo waxaad heli doontaa si aad u aragto horumar diinta aad (sida lagu muujiyey by shaashada ka). Waxaad fursad u hako ama Cancel aad videos diinta ka duubay haddii aad u baahan tahay in.
Waa dhan-in-mid software la Wondershare Video Converter Ultimate ah. Waad aan ku xaddidnayn beddelaad file oo kaliya laakiin waxa uu sidoo kale ka buuxaan dhisay-in editor iyo sidoo kale DVD abuure (waxaa lagu sharaxi doonaa Talaabada 4)! Maxaa kale oo aad weydiisan kartaa? Waxaad noola karo iyo jar videos aad duubay, dar saamaynta, geliso subtitles iyo wax ka badan ka qaban la.
Sida hoos ku soo bandhigay, waxaa jira kala screen oo aad yeelan doontaa in ay u arkaan isbedelka la sameeyey-waqtiga dhabta ah. The file il asalka waa Falanqeynta kaga tegey version post-saxar on xaq.
Waa adag tahay in ay ku fashilmaan aad dhagaystayaasha la DVD ah oo macmal ah! Waxaa jira badan oo template si aad u doorato iyo inaad sidoo kale gelin kartaa track sawir iyo gabaygayga jecel galay asalka. On top of in, DVD ee menu (ie badhamada talaabo) waa customizable sidoo kale!
Waxaad ka dibna ku socon kartaa inay calaamadiso DVD aad, go'aanso haddii aad jeclaan doonaa si ay u gubaan baxay DVD jirka ah ee Christmas ama badbaadin sida image file ISO ah, dhigay tayada iyo sidoo kale muuqa. Marka sameeyo, click fudud ee Gubashada yahay oo dhan aad u baahan tahay!
Waxaa aad u tagto, DVD cusub Abuuray videos lagu duubay on telefoonada sida hadiyadda ugu fiican Christmas sanadkan la wadaago!
Qof kasta oo lagu talinayo DVD Lab Alternative?